Imikhiqizo engama-40 esebenza kahle KAKHULU, inamathani wokubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-5 | Isiza seMed
Esikhathini esiningi, uthenga umkhiqizo online futhi awulindele okuningi kuwo, ngaphandle kokufeza umsebenzi owawuhlosiwe. Kepha njalo uma isikhashana, kuba khona okuthile emnyango wakho ongena ngapha nangapha, njengoba kunjalo ngale mikhiqizo ebukezwe kakhulu okulindelwe ngokweqile ukuhlala njalo.
Kungenzeka ukuthi, ubone eminye yale mikhiqizo ivela kolunye uhlu lwe-inthanethi oluhamba phambili, futhi yingoba bayifanele indawo yabo kubo. Case iphuzu: lesi sipika seBluetooth ephathekayo esihlohle cishe ngokubuyekezwa okungu-25,000 kwe-Amazon yezinkanyezi ezinhlanu. Ayigcini ngokunikeza kuphela okuhlaba umxhwele, okugcwele umzimba we-stereo, kodwa futhi kunikeza isikhathi esengeziwe samahora ayi-12 wesikhathi sokudlala. Futhi njengoba kungavikeleki amanzi, kuyisinqumo esihle uma uchitha usuku echibini noma ulengiswa echibini. Uzothola amanye ama-newbies lapha futhi, kepha, njengowoyela wama-magnesium osiza ukuphumula izicubu ngemuva kokusebenza kanzima (noma amahora ambalwa asetshenziswe kukholi yomsebenzi oshubile) noma iqoqo lama-plugs ahlakaniphile akuvumela ukuthi ulawule izinto zokusebenza kusuka kuhlelo lokusebenza ocingweni lwakho.
Uma ungakaze umangazwe umnandi ngumkhiqizo owenze kahle okwesikhashana, uzothola ukwelashwa. Zonke lezi zinto zivunyelwe ukubuyekezwa futhi zitholakala ngokuthumela kwamahhala kwezinsuku ezimbili ku-Amazon.
Sincoma kuphela imikhiqizo esiyithandayo nokuthi sicabanga ukuthi nawe uzoyithanda. Singathola ingxenye yokuthengisa kusuka kumikhiqizo ethengiwe kule ndatshana, ebibhalwe yiqembu lethu leCommerce.
Ukuhamba izinsuku ezimbalwa? Le khamera yokuphepha yasekhaya ivumelanisa ngohlelo lokusebenza, ukuze uthole okuphakelayo okubukhoma kusakazwa ngqo kwifoni yakho. Okungcono kakhulu, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza ukufaka ikhamera bese uthola umbono wegumbi lonke. Kuqoshwa isiqeshana se-12-sekhondi ngaso sonke isikhathi lapho kutholwa ukunyakaza, bese kugcinwa efwini, ukuze ukwazi ukukuhlola kamuva.
Sika intambo bese uthola i-TV yakho usebenzisa i-Amazon Fire Stick, ukuze usakaze izinkulungwane zama-movie neziqephu ze-TV ngokuchofoza nje kokude. Iyahambelana nazo zonke izinsizakalo ezinkulu zokusakaza futhi ukufinyelela kumibukiso namafilimu ku-Amazon Prime nakanjani. Futhi, ngokusebenza kwe-Alexa, ungasebenzisa imiyalo yezwi ukuthola ngqo okudingayo.
Ilungele ukubanjwa kwezinyoni, ukuzingela nokuhamba ngezinyawo, lezi zingilazi zingaboniswa amandla amakhulu we-12x futhi ifakwe ukusebenza kokukhanya okuphansi, ngakho-ke ungaqhubeka uzisebenzisa lapho ilanga liqala ukushona. Izindebe zamehlo ezingashintshwa zihlala noma ngubani ogqoka izingilazi, nama-binoculars asonga amancane, ukuze uwagwaze ephaketheni lakho.
Izinto ezincane zenza umehluko omkhulu, njengalezi zingxobo zezintambo ezivikela izintambo zakho ekuphambukeni khona lapho zigobeka khona kakhulu. Ama-collars agobekayo aslayida kalula futhi alungele izintambo eziningi, kufaka phakathi i-USB, i-micro-USB, nezintambo zombani. Isethi ngayinye iza nama-collar ayisishiyagalombili amaningi.
Uma ubhekene nokushayela ucingo, ukoma, noma izithende eziphukile, lo ukhilimu wezinyawo osindayo yilokho okudingayo ukubabuyisela esimweni. Yakhelwe ngethamo elikhulu le-allantoin - i-moisturizer eyingqayizivele engena ezingqekweni ezinzima zesikhumba ukuhambisa i-hydration ejulile. Beka lokhu ngaphambi kombhede futhi izinyawo zakho zizoqala ukuguquka ezinsukwini ezimbalwa.
Ukutshala imali okukhulu empilweni yakho, leli phenyootic lifaka izinhlobo eziyi-12 nefomula lokukhipha isikhathi elibuyisela kancane ukulingana esiswini sakho, lisebenzela ukuxhasa amasosha omzimba nokugaya ukudla okunempilo, kanti futhi likhulisa impilo yengqondo nangokomzwelo (yebo, ithumbu lakho lingelakho "ubuchopho" besibili). Yi-vegan, i-kosher, i-non-GMO, futhi ayinayo i-allergener ejwayelekile efana nokolweni, gluten, namantongomane.
Ngenxa yalesi sicoci sokukhipha amanzi, akusekho okumi lapho sizibuza ukuthi lingakanani ifomula ongalithululela ngokuphepha echibini. Ifika kahle ngaphambi kokulinganiswa kumithamo emibili futhi iqinile ngokwanele ukugqekeza ngezinwele, insipho, iphepha nezigqoko zamafutha. Yisebenzise ekugezeni noma eshinini nasekhishini ukucwila.
Ukusetshenziswa kwesikhumba kwe-magnesium kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthola izinzuzo zalesi simangaliso samaminerali esidume ngokuthoba izicubu ezinobuhlungu, ukunciphisa iminyakazo, ukuvimbela ama-migraines, ukunciphisa imizwa yokukhathazeka, nokukhuthaza ukulala okufanele. Le oyili ye-magnesium itholakala oLwandle Olufile, futhi ababukezi base-Amazon bafunga imiphumela, ngombhalo owodwa wokuthi "isebenza ngokubabazekayo ngobuhlungu bemisipha nobuhlungu bezinzwa."
Izintandokazi zabalaleli be-A abahamba njalo ekhaphethini elibomvu, le ndlela yokucima ukoma kaMoses Badescu iyindlela engenangqondo yokuphelisa iziphambeko lapho sebeqhuma. Ifomula lenkolo ethandwayo lenziwa ngokuhlanganiswa kwe-zinc enciphisa uwoyela ne-salicylic acid, kanye ne-calamine ukuzolisa ubomvu nokuvuvukala. Beka ngaphambi kombhede, uvuke ubheke endaweni ebonakalayo.
Gcina okusele kwakho kusha njengobusuku oqale ubapheke ngabo ngalezi zibambo zokugcina ukudla ezelulayo ukuze zilingane ngaphezulu kwezitsha nezitsha. Yakhelwe i-silicone yamahhala ye-BPA, ikwazi ukumelana nokushisa futhi i-dishwasher-safe, futhi ipakethe ngalinye liza namabhodlela ayisikhombisa ngosayizi abahlukahlukene.
Uma ungakaze uzame ingubo ebunjiwe ngaphambili, uzofuna ukuya phambili bese ucindezela u- "Faka ku-Cart". Isisindo sisiza ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-dopamine ne-serotonin, okungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka, kukhuthaze ukulala, futhi kukwenze ukhukhuleke ngokushesha. Kutholakala ngezinsimbi ezahlukahlukene - khetha eyodwa cishe i-12% yesisindo somzimba wakho.
Lokhu kubhaxha okuhlanganayo okunyawo kabili kufaka i-pumice ohlangothini olulodwa ukukhipha isikhumba esomile kanye nama-callus, ngakolunye uhlangothi kukhona insipho emollient eyenziwe ngo-aloe ojulile, ibhotela le-shea, novithamini E. Sebenzisa lokhu njalo ngezinyawo ezibukwayo. futhi uzizwe ubushelelezi - ungabi rough.
Ngalesi sivikelo esisetshenziswe njengokhowa, ungaqiniseka ukuthi azikho izinwele ezizokwehla ezimbizeni bese zidala amakhethini. Idizayinelwe ukufanela yonke imisele ejwayelekile yethubhu, ibamba imicu yezinwele futhi izisongele ngaphakathi kwesilinda sesikhungo, kuyilapho iziqholo zivumela amanzi ukuthi ageleze ngokukhululeka, ngakho-ke ngeke ume nge-intshi yakho ngenkathi ushampoo.
Isithandwa esithanda izinkulungwane zokubuyekezwa kwezinkanyezi ezinhlanu zase-Amazon, lesi sipika se-Bluetooth sixhuma ngaphandle kwentambo kunoma iyiphi idivayisi futhi sinikeza umsindo wekhwalithi yesitudiyo esinamandla amahora afinyelela kwayi-12 ngecala elilodwa nje. I-IPX7 ayiyona manzi, ngakho-ke ungakwazi ukujabulela umculo wakho eduze echibini noma olwandle, futhi umsindo owakhiwe ngaphakathi wokukhansela kwi-mic kusho ukuthi muhle kakhulu ngezingcingo. Khetha imibala eyisishiyagalolunye.
Kuhle kakhulu ukwenza izitsha nokuhlanza okuchitheka ngalezi zindwangu ezisebenzayo kwenziwa nge-cellulose ethambisa kakhulu ukotini, kanti ipakethe elilodwa elingayisithupha lingathatha indawo yokufika kwama-90 amathawula amaphepha. Iphelele uma usebenza indlela yakho ubheke ekhaya elisebenzisa imfucumfucu engenalutho, ziyageza ngomshini futhi ngeke ziklabhe indawo enhle ezintekenteke noma ishiye inkenteza ngemuva.
Uma ubhekana nokulimala kwekhanda noma i-migraines, uyazi ukuthi zingaphazamisa kanjani, kepha le divayisi ye-acupressure ingahle ikunikeze ukukhululeka kwemvelo. Ngokufaka amasu isiqeshana endaweni eyi-L14 acupressure point (phakathi kwesithupha sakho nesandulelangaphambili), kuzonikeza ukucindezelwa okwelaphayo ukudambisa izinhlungu ngenkathi kulinganisa amandla nokunciphisa ukungezwani.
Ukuhogela ubumba, isikhutha, kanye no-musty kuyizinkinga ezivamile emakhaya ayo yonke iminyaka, kepha lokhu kuncibilika komswakama kuyinto elula. Mane ugobe phezulu futhi ngokuzenzakalelayo kuzoheha futhi kudonsele ukungabinamandla ngokweqile, kushiye noma yiliphi igumbi lisha futhi lome. Omunye owabuyekeza i-Amazon wabhala, “Ukunciphise kakhulu ukuwohloka kwendlu yami yokugezela, futhi kuthatha isikhathi eside! Kungcono kakhulu kunazo zonke ezinye izixazululo esizamile. Ngisuse nephunga lobuhlakani ebelisikhathaza izinyanga. ”
Kuyasilinga kakhulu ukuvele ulahle yonke imicikilisho yakho bese uphela esibondweni semoto yakho, ukuvele uyivule lapho usindwa ngumthwalo wokudla bese usondela ebhekene nomthwalo wokudla okuyi-junk. Lo mhleli we-trunk uzoshaya lokho kudideka kube ngokuhlelekile, ngenxa yezindawo ezimbili ezinkulu zezinto ezinkulu kanye namaphakethe we-mesh asemaceleni amathuluzi nezesekeli. Futhi, yonke le nto igoqa iflethi lapho sekuyisikhathi sokufaka amanye amasokhethi.
Hlanza ama-skillets akho e-cast iron kanye negridi ngemuva ngokuphepha ngale brashi yokuphrinta yensimbi. Amabhulokhi amafushane aqine ngokwanele ukunikeza ukuskrola okuhle, kuyilapho isigaba esilingile sikuvumela ukuba ufinyelele emakhoneni bese umsabalazi esebenza ngaphandle kokudla okusetshenzisiwe. Kuyindlela ephumelelayo yokuhlanza ngaphandle kwensipho, ukuze ipani lakho ligcine lokho kuthola okuhle.
Inamandla ngokwanele ukubamba kuze kube ngamaphawundi ayi-15 ngaphandle kokuqhakaza, lezi izingwegwe zokugcina zilungele okhiye bokulengiswa, izithombe, amathawula nokuningi. Bazogibela kunoma iyiphi indawo ebushelelezi, kufaka phakathi i-tile nezibuko, futhi njengoba icacile, cishe ayibonakali. Kusekelwa okunamathele, futhi kufakwa kalula futhi kulula ukukhipha ngaphandle kokulimaza noma iyiphi indawo.
Enye (ahem) eyintandokazi yabalandeli, le fan compact kodwa enamandla iye yathola ukubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-17,000 zase-Amazon. Umlandeli wejubane amathathu ujikeleza umoya omningi ukuhlinzeka impumuzo kunoma yiliphi igumbi elishisayo, kanti ikhanda likhipha ama-degrees angama-90, ukuze ukwazi ukubhekisisa ukufakwa komoya lapho ufuna khona. Kepha ngokungafani nabanye abalandeli abanamandla, lokhu kunendawo encane eyanele yokuhlala etafuleni lakho noma etafuleni lekhofi.
Uma ukujabulela ukulalela umculo, ukuzindla, noma ama-podcasts ngenkathi ushayela ukulala, le maski yokulala ye-Bluetooth yilokho okudingayo. Izici zemaski ye-foam yememori inakhelwe ngaphakathi izipikha ze-Bluetooth, ukuze ulalele uhlu lwakho lokudlalwayo ngenkathi uvimba ukukhanya ngasikhathi sinye. Futhi, umphambili we-maski unamavolumu ahlanganisiwe kanye nezilawuli zokudlala / zokumisa isikhashana ekusebenzeni okulula.
Ngenxa yalesi sikhwama sokugeza izinyawo, unganikeza izinyawo ezisebenza kanzima lapho uzibopha. I-mat inamakhulu ama-silicone ahlahlela amabhuleki ngaphezulu, kanye nezinkomishi zokugibela ezingezansi zokugcina phansi zivikelekile phansi.
I-Collagen iyindlela ebalulekile yokwakha yezinhlelo eziningi zomzimba kufaka phakathi izinwele, izipikili, isikhumba, nokuhlangana, futhi le-collagen powder yindlela elula nephumelelayo yokuthola okuningi kwayo. Ngama-gramu ayi-20 we-collagen ekukhonzeni, ayinamnandi futhi ayinamathethi, futhi inyakaza ibe iziphuzo ezishisayo noma ezibandayo, ezinjengekhofi, amanzi, ama-smoothie neziphuzo zeprotheni.
Sincike emishini yethu yokuwasha ukugcina izingubo zethu zihlanzekile, kepha - bahlanzeke kangakanani imishini yokuwasha? (Cue doomsday music.) Sebenzisa umthwalo ngethebhulethi yokuwasha yomshini kanye ngenyanga ukuze uhlanze izinsalela nezinsalela futhi uqinisekise ukuthi umthwalo wakho ohlanzekile wokuhlanza uhlanzekile ngempela.
Ukuhlala ngaphandle ngemuva kwendawo akusho ukuthi uchitha zonke izimbungulu zantambama - swaya lezi zingibe ezindiza ukuheha noma yiziphi izinambuzane ezicasulayo, ukuze ukwazi ukujabulela okungaphandle okuhle. Kufakazelwe ukubamba izimbungulu ezingama-20,000, konke okudingeka ukwenze ukufaka amanzi kwiheythi ngaphakathi ukuze uncenge izimpukane.
Ukuchitha isikhathi esithe xaxa kungasho ukulunywa umiyane nezintuthwane zonakalisa umdlalo wakho wokugaya, kepha lesi siphuzo esilawula izinambuzane senzelwe ukugcina izinambuzane zingapheli amasonto amane, ngisho noma kungemvula. Mane unamathisele kunoma iyiphi i-hose ejwayelekile engadini ukuze uyihambise kalula egcekeni lakho, futhi izokhipha omiyane, izintuthwane namaza.
Uma umfishane emachwebeni e-USB, ungasebenzisa lesi sikhwama se-USB ukukunika isikhala esithe xaxa se-plug-in. Iyahambisana nezinhlelo zokusebenza zombili zeWindows ne-Mac, ifaka amachweba amane angavulwa futhi avulwe ngokuphumelelayo ukukhulisa amandla ngendlela encomekayo, futhi usayizi omncane, ohlanganisiwe ngeke uthathe isikhala esingadingekile edeskini lakho.
Kwenziwe nge-silicone engu-100%, lezi zingcwebe zesitsha zoma ngokushesha kuneziponji zeselula, okusho ukuthi ngeke zifukamele amagciwane noma iphunga. Bakwazi ukususa ngisho nezinto ezibiwe kakhulu ebhakeni ebunjiwe, futhi bazohla yonke i-cookware yakho ngokuphepha futhi ngaphandle komonakalo. Iphakethe ngalinye liza nezikhuhla ezintathu.
Phonsa la mabhola owomisa uboya ngomthwalo wakho olandelayo, futhi azosiza ukujikeleza umoya ukuze izingubo zenziwe ngokushesha (okuzogcina kulondoloze amandla futhi kunciphise nomthethosivivinywa wakho wamandla). Zisebenza futhi nokuthambisa izingubo nokuvikela imibimbi, okusho ukuthi ngeke uze uqoqe amashidi owomile ngokuzayo lapho uya esitolo.
Le rack yokucima ukoma ingabekwa ngaphezulu kokucwila kwakho, ukuze wonke amanzi ehla ngqo echibini, kodwa futhi yindlela ephelele yokuhlanza izithelo nemifino lapho ungenayo i-colander elula. Futhi uma usuqedile ukuyisebenzisa, igoqa kalula ukuze igcinwe, ngakho-ke ungayifaka ngaphansi kwesinki.
Uma izindandatho zesiliva noma imigexo ibukeka imbi ngokwengeziwe ngenxa yokugqoka, ungazivuselela ngamandla ngosizo lwalesi sihlobisi. Kwakhelwe ngebhasikidi elakhelwe ngaphakathi, ukuze ushiye izingcezu zakho ezingcolile kakhulu kusixazululo ubusuku bonke, kepha - ngamatshe ayigugu acwebezisayo nezinsimbi - uzofuna ukumane nje ukhiphe ibhulashi ngobumnene.
Isixuku esithandwa kakhulu e-Amazon, lo mat we-acupressure "ngombhede wezipikili" empeleni oyofuna ukulala kuwo. Kukhiqizwe izinkulungwane zama-acu-point, futhi uma ulele kuwo, azosebenza ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukuncipha kwengcindezi, ukusekela umjikelezo omuhle wokuvuka, kanye nokudambisa izinhlungu. Omunye owabuyekeza wabhala wathi, “Ngikuthole lokhu ngoba nganginentambo ebuhlungu nethambile nomhlane ongemuva futhi angikwazi ukukhokha imisindo ejwayelekile. [...]. Ngemuva kwemizuzu embalwa, yaqala ukushisa, kepha ngendlela enhle. Ngazithola sengivale amehlo ngiphumula. Lapho ngivuka, ngawuzwa umehluko! ”
Abazali bezilwane zasekhaya bazothanda lesi sikhala esilinganiselwe kakhulu se-compact hand esibonisa umkhencezi okhethekile osusa ikati nezinwele zenja kusuka opholstery kalula. Muhle futhi ukuthi usetshenziswe ekhaphethini, ezindaweni eziqinile, nasezitebhisini, futhi intambo yamandla enezinyawo eziyi-16 ikunikeza ubude obukhulu ongabusebenzisa.
Yebo, kunendlela yemvelo yokuphuma kwezinhlaka zokugqoka futhi lokhu okunamathele kwe-stain kufakazela lokho. Kwenziwe ngezithako ezimnene njengamafutha kakhukhunathi we-saponut namafutha kalamula, kunzima ngokwanele ukususa noma yini kusuka ewayinini elibomvu kuya kuyinki kuya ezinsikeni zotshani. Ababuyekezi bafunge imiphumela - omunye ubhale ukuthi, "Kusindiswe izingubo eziningi kakhulu ezibhekiswe kudoti."
Lawula umenzi wakho wekhofi, fan, noma isibani segumbi lokuhlala kusuka noma kuphi emhlabeni ngalawa plugs ahlakaniphile avumelanisa uhlelo lokusebenza lwamahhala kufoni yakho. Okungcono kakhulu, ungazisebenzisa ukusetha amashejuli alezo zinto zokusebenza, ngakho-ke akudingeki ukhumbule ukucima izibani lapho usuka endlini. Futhi okungcono (futhi futhi), ungasebenzisa i-Alexa noma i-Google Home ukulawula izwi ngalinye.
Zenzele into oyithandayo futhi uthenge lezi zintambo zombani ezihlala isikhathi eside nezisebenza isikhathi eside ezenziwe ngensimbi enomshini osindayo. Futhi, ngamamitha ayi-10 ubude, kuzodingeka ungabe usaya odongeni ngokuzayo lapho udinga ukuthatha ucingo ngenkathi ishaja ifoni yakho. Iphakethe ngalinye liza nezintathu.
Uma kukhulunywa ngokugcina izinga lokushisa lesiphuzo, leli bhodlela lamanzi lensimbi elingenasici likhipha okungcono kakhulu kubo. Ukugcotshwa okuphindwe kathathu kanye ne-vacuum-ins, kugcina iziphuzo ezibandayo ziboshwe amahora angama-41 neziphuzo ezishisayo zishisa zize zifike ku-18. Itholakala ngosayizi ezintathu nemibala engu-16, efana ne-onyx, i-blue suede, ne-teakwood efanekiselwa lapha.
Kukhona indlela engcono yokuphuza ama-cocktails, futhi ihlobene nalawa isikhunta se-ice esenza ama-cubes amakhulu nama-sphere amakhulu. Zincibilika ngokushesha kunama-cubes asayizi ajwayelekile, okusho ukuthi iziphuzo zakho zihlala zigodliwe kepha zingangeni manzi. Futhi zenziwe nge-silicone eguquguqukayo, okwenza kube lula ukuphuma kumabhubhu ngasikhathi sinye.
Gcina umhlane wakho ujabule - noma ngabe uchitha amahora amaningi edeskini lakho - ngalo mcamelo ovuthiwe. Kwenziwe kusuka kuthambo lememori elithambile nelisekelayo, kusekela ukuqondanisa okufanele komgogodla ukuvikela ukuqina komzimba kanye nokuqina kwemisipha, nezinduku ezimbili zokuxinana okwenziwe ngesihlalo sakho ukuze kugcinwe kuphephile. “Ngisindise umhlane wami,” kubhala omunye ukubuyekeza.
Isikhathi sokuthumela: Jul-22-2020